Wasiirka warfaafinta Puntland,” Jeegaantu haddii ay wada hadal doonayso dhulkooda haku noqdaan. | puntlandi.com
Wasiirka warfaafinta Puntland,” Jeegaantu haddii ay wada hadal doonayso dhulkooda haku noqdaan.
Garowe (Puntlandi) Wasiirka warfaafinta dowladda Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab, oo shir jaraa’id ku qabtay Garowe, ayaa u sheegay maamulka Hargeysa haddii ay doonayaan nabad iyo wada hadal inay ku laabtaan dhulkooda kana baxaan dhulka Puntland ee ay kusoo duuleen.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inayan jirin sabab lagu wada hadli karo inta maamulka jeegaantu uu ku sugan yahay ciida Puntland, wuxuuna yidhi,”
“Maxaa laga wada hadlayaa, oo Puntland kala hadlaysaa maamulka Hargeysa. Puntland dhulkeeda cid laga hadlayo majirto. Ninkii wada hadal doonaya dhulkiisa haku noqdo, dadka yaan loo sheegin waxaan jirin,, haday Somaliland doonayso in lawada hadlo haka baxaan gobolka Sool.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ayaa ka jawaabay baaqyo kasoo baxay beesha caalamka oo ku saabsan arrimaha colaada gobolka Sool, wuxuuna sheegay dowladda Puntland inay masiirka dhulkeeda cidina kala tashanayn, beesha caalamkuna waxba ka qusaynin waxa ka socda Sool.
Faahfaahin shirka dhameystiran goo dhow la socda.